Ardora: ကျောင်းအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော app Linux မှ
Ardora - ကျောင်းအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးရန်စိတ်ဝင်စားစရာ app တစ်ခု
Linux Post Install လုပ်ပါ | | applications များ
ပုံမှန်နေ့တိုင်းပုံမှန်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည် ဆိုက်ဘာအာကာသအထူးသဖြင့်အားဖြင့် တွစ်တာငါတစ် ဦး ၏တည်ရှိမှုကိုဖြတ်ပြီးလာကြပြီ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အခမဲ့ appအခမဲ့မဟုတ်သလိုပွင့်လင်းမှုလည်းမရှိဘူး။ သို့သော်ဤသည်အထီးကျန်နှင့်လူမှုရေးဝေးကွာ၏ဤသည်နေ့ရက်ကာလအဘို့, COVID-19 ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါ၎င်းသည်များစွာသောလူများအတွက်အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်ရန် ဆရာများနှင့်ကျောင်းသားများကတည်းကကတည်းကဖြစ်ပါတယ် ပညာရေးareaရိယာ။ ပြီးတော့ဒီစိတ်ဝင်စားစရာ app ကိုခေါ်တယ် "မီးလောင်ရာ".
"မီးလောင်ရာ" အလွန်ပြည့်စုံပြီးအသုံးဝင်သော application တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးနိုင်အောင် ဝဘ်ဆိုက်ဝဘ်ဒီဇိုင်းသို့မဟုတ်ပရိုဂရမ်းမင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်နည်းပညာဆိုင်ရာဗဟုသုတများစွာမလိုဘဲအလွယ်တကူမြန်ဆန်စွာ။
၏ခေါင်းစဉ်သို့ရတဲ့မီ « Ardora »အခမဲ့ app ကိုအခမဲ့ဖွင့ ်၍ မရသောကြောင့်၎င်းတွင်ရှိနိုင်သည်ကိုသတိပြုသင့်သည် အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းအခြားရွေးချယ်စရာ ခေါ် app ကိုရန် « JClic », ငါတို့နောက်ပိုင်းတွင်ထုတ်ဝေပါလိမ့်မယ်အရာပေါ်, လက်ရှိ၎င်း၏ထဲမှာဖော်ပြထားတယ် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် အဖြစ်:
"မာတီမီဒီယာပညာရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုတီထွင်ခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု၊ ၎င်းသည် operating systems အမျိုးမျိုးဖြစ်သော Linux, Mac OS X, Windows နှင့် Solaris တွင်အလုပ်လုပ်သောပွင့်လင်းသောစံနှုန်းများကိုအခြေခံထားသောအခမဲ့ software application တစ်ခုဖြစ်သည်။"
ထို့အပြင်ပညာရေးဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အင်တာနက်ပေါ်တွင်အခြားအခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောစီမံကိန်းများနှင့် application များစွာရှိသည်။ ဘယ်ဟာကဆရာ၊ ဆရာမတွေရော၊ ကျောင်းသားတွေရော၊ ကွန်ပျူတာချစ်သူတွေအတွက်ဖြစ်စေအလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဖော်ပြရန်တစ်ခုမှာ «PrimTux - Raspberry Pi အတွက်ပညာရေးကို ဦး စားပေးသောအစက်များ».
PrimTux - Raspberry Pi အတွက်ပညာရေးကို ဦး စားပေးသောအစက်များ
1 Ardora 9: ဝဘ်အတွက်ကျောင်းအကြောင်းအရာများဖန်တီးခြင်း
1.3 ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့် screenshots များ
မီးလောင်ရာ 9: ဝဘ်အတွက်ကျောင်းအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးခြင်း
လက်ရှိတွင် "မီးလောင်ရာ" သူ့အဘို့တတ်၏ ဗားရှင်း 9.0aရက်စွဲ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ 13 2021 ။ များသောအားဖြင့်အဘယ်သို့ခေါ်သည်အဘို့ "Ardora 9"။ ပြီးတော့သူ့ကိုးကား တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အောက်ပါအတိုင်းအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည် - \_ t
"၀ က်ဘ်ဒီဇိုင်းနှင့်ပရိုဂရမ်းမင်းဆိုင်ရာနည်းပညာဗဟုသုတမရှိဘဲ၊ သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဝဘ်ဆိုက်ကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည့်ဆရာများအတွက်ကွန်ပျူတာ application တစ်ခု။"
သူတို့ရဲ့နေစဉ် ဝိသေသလက္ခဏာများ, လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်အတိုင်းအတာ အောက်ပါအတိုင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြသည်:
"အမျိုးမျိုးသော multimedia စာမျက်နှာ ၁၀ ခုထက်ကျော်သော - ပြခန်း၊ မြင်ကွင်းကျယ်၊ ရုပ်ပုံများ၊ mp35 player များသို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးသော multimedia စာမျက်နှာ ၁၀ ခုကျော်ကို Ardora ဖြင့်သင်ဖန်တီးနိုင်သည်။ mp10, etc; “ ဆာဗာစာမျက်နှာများ”၊ မှတ်စုများနှင့်စုပေါင်းအယ်လ်ဘမ်၊ အချိန်ဇယား၊ ပိုစတာ၊ ချက်တင်၊ ပိုစတာ၊ မှတ်ချက်ပေးသည့်စနစ်နှင့်ဖိုင်မန်နေဂျာ၊ အခြေခံအားဖြင့်ကျောင်းသားများအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် ရည်ရွယ်၍ အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာများကိုအတူတကွတင်ပြခြင်း၊ ဝဘ်နေရာများ (သို့) virtual desktop များ (desktop) ။"
ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့် screenshots များ
ဒေါင်းလုပ်ရယူရန် GNU / Linux များ, ငါတို့ရုံအပိုင်းကိုသွားပါ ဝက်ဘ်ဒေါင်းလုပ်ကိုနှိပ်ပါ ဒေါင်းလုပ် button ကို ထို့နောက်ထံမှသင့်လျော်သော option ကိုရွေးချယ်ပါ "Ardora 9.0 - Linux 32bits" y «Ardora 9.0 - Linux 64bit ».
တစ်ချိန်က download လုပ်ပြီး, နောက်ပိုင်းတွင်သင်၏ unzipped «.zip ဖိုင်»ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှုအတွက်သင့်နာမည်အပြည့်အစုံဖြစ်သည် "Ardora9_0aL64.zip"သင်၏ဖိုင်ကိုသေချာစွာလုပ်ရန်လိုသည် "မီးလောင်ရာ" လမ်းကြောင်းအတွင်းမှာ «/home/sysadmin/Descargas/Ardora9_0aL64/», execute permissions ရှိရင်၊ ရိုးရိုးလေးနှိပ်လိုက်ရင်အဲဒါကိုဖွင့်ပြီးစသုံးပါ တပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါ.
ဖွင့်ပြီးတာနဲ့ဒီအသုံးဝင်သောကိရိယာကိုသုံးရန်ကျွန်ုပ်တို့သင်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်ကံကောင်းတာကရှိပါတယ် စပိန်ဘာသာစကားထောက်ခံမှုဘာသာစကားများစွာရှိသောကြောင့်၊ ထိုအဘို့, ငါတို့သည်သင်တို့၏အသုံးချနိုင်ပါတယ် အကူအညီကဏ္။ didactic နှင့် updated ပစ္စည်းတွေအများကြီးနှင့်အတူအတော်လေးအသေးစိတ်လာပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနှင့်လိုအပ်လျှင်အောက်ပါတွင် link ကို အဆိုပါအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တရားမဝင်လက်စွဲစာအုပ်ရှိပါသည် ယခင်ဗားရှင်း၊သင်နားလည်ရန်ကူညီရန်စူးစမ်းလေ့လာနိုင်သည်။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Ardora», အရာကအသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းအလွန်ပြည့်စုံခြင်းနှင့်အသုံးဝင်သော application ဖြစ်ပါတယ် ဆရာများ။ ပြီးတော့သူတို့ကသူတို့ဖန်တီးနိုင်တယ် ဝဘ်ဆိုက်အဓိကအခက်အခဲမရှိဘဲအလွယ်တကူမြန်ဆန်စွာ၊ တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ယခုသင်ဤကြိုက်လျှင် publicación, မရပ်ပါနှင့် မျှဝေပါ အခြားသူများနှင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ လိုင်းများ၊ လူမှုရေးကွန်ယက်များသို့မဟုတ်စာတိုပေးပို့ရေးစနစ်များ၏အသိုင်းအဝိုင်းများ၊ ဖြစ်နိုင်ရင်အခမဲ့၊ ကွေးနနျးစာ, signal, Mastodon သို့မဟုတ်အခြား Fediverse, ဖြစ်နိုင်ရင်။
ပြီးတော့ကျွန်မတို့ရဲ့ပင်မစာမျက်နှာကိုသွားကြည့်ဖို့သတိရပါ «FromLinux» သတင်းများကိုပိုမိုလေ့လာရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင်ချန်နယ်ဖြစ်သည် DesdeLinux မှကြေးနန်း. သတင်းအချက်အလက်များပိုမိုရယူရန်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသင်သွားရောက်နိုင်သည် အွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက် como OpenLibra y JedIT, ဒီခေါင်းစဉ်နှင့်အခြားသူများမှဒီဂျစ်တယ်စာအုပ်များ (PDFs) ကိုဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ရန်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Ardora - ကျောင်းအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးရန်စိတ်ဝင်စားစရာ app တစ်ခု
Open Source ရင်းမြစ် FPGA ဖောင်ဒေးရှင်းသည်ပွင့်လင်းသောဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖြေရှင်းမှုများပူးတွဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မိတ်ဖက်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်
DeaDBeeF: သေးငယ်သော၊ Modular၊ စိတ်ကြိုက်အသံဖွင့်စက်